မတ်လ 2018 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » မတ်လ
လစဉ်မော်ကွန်း: မတ်လ 2018
ရာထူး: အငယ်တန်းကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: DALIX တည်နေရာ: တိကျစွာချို Cucamonga, CA အမေရိကန်ယောဘကိုအသေးစိတ် Conceptual နှင့်ပစ်မှတ်ဖောက်သည်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းမျိုးစုံဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများဝိုငျးဝနျး။ အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အမြင်တွေ့ဆုံ၏အချက်အားလုံးသမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်ပြက္ခဒိန်ကြောင့်ရက်စွဲများမောင်းထုတ်ရန်ဖက်ရှင်အခွင့်အာဏာအဖြစ်ကို Photoshop နှင့် Illustrator အက်ဥပဒေအပေါ်အနုပညာလက်ရာများကိုဖန်တီးပါ။ ဒီဇိုင်း & ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးအဘို့အခေတ်ရေစီးကြောင်း Enthusiasm နဲ့သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ...
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: 23andMe တည်နေရာ: Mountain View, CA အမေရိကန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမျိုးရိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အရေးယူမှတစ်ဦးချင်းစီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံများကိုတည်ဆောက်ကူညီရန်တစ်ခုခြွင်းချက်ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာရှာဖွေနေသည်။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍသည်သင်၏အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်ပြီးတုံ့ပြန်မှုကို web သို့မဟုတ်ဇာတိမိုဘိုင်း-အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်နိုင်သည်။ 23andMe မှာဒီဇိုင်း ...
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: BlueJeans တည်နေရာ: Mountain View, CA အမေရိကန် BlueJeans သင်သွားလေရာရာ၌သင်ကဗီဒီယိုဆောင်ခဲ့အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါကဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေး၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ BlueJeans နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများ, ဖြစ်ရပ်များ, နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များ, နှင့်မိုဘိုင်း, desktop ပေါ်မှာ, ဒါမှမဟုတ်အခန်းတစ်ခန်း system အပါအဝင်မည်သည့်တည်နေရာသို့မဟုတ် device ကိုဖြတ်ပြီးအကျင့်ကိုကျင့်များအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ BlueJeans ခေတ်သစ်ခေတ်ဖြစ်ပါတယ် ...
မီဒီယာနည်းပညာကို Maintenance Engineer အ
ရာထူး: မီဒီယာနည်းပညာကို Maintenance Engineer အကုမ္ပဏီ: NBCUniversal တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်အဆိုပါ NBC သတင်းထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာကို Maintenance ဌာနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအား NBC အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် Newsgathering စစ်ဆင်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့စနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ New York မှာတည်ရှိပြီးဗဟိုစစ်ဆင်ရေး, နယူးယော့နှင့်အတူအသင်းအာရုံ, စားသုံးမိရာမှအထိထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများနှင့် software, တည်ဆောက်ခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်တည်းဖြတ်သည် ...
တီဗီ / အသံလွှင့်မီဒီယာဒါရိုက်တာ
ရာထူး: တီဗီ / အသံလွှင့်မီဒီယာ Company ၏ဒါရိုက်တာ: Eargo တည်နေရာ: Mountain View, CA အမေရိကန်ကျနော်တို့ Eargo နေနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးမစ်ရှင် ... အစဉ်အမြဲ, ကြားနာကျန်းမာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်အယှက်များနှင့်အသွင်ပြောင်းဖြင့်ပေါ်မှာဆိုရင်! ပြတ်တောက်သင်ရှာနေတစ်ခုခုမပါလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနောက်အလုပ်ပို့စ်မှအပေါ်ကိုရွှေ့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့နံနက်အိပ်မက်၌အိပ်ရာထဲကခုန်တဲ့သူတွေကိုအသည်းအသန်တစ်ဦးချင်းစီရှာနေ ...
ရာထူး: အသံလွှင့်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: FUSE မီဒီယာတည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယူးယောက်ရုံးထဲမှာအခြေခံပြီးဖျူးမီဒီယာလက်ရှိ Post-ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးနည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးကြောင်းသေချာစေရန်အတွေ့အကြုံထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာရှာကြံနေပါတယ်။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍရိုးရှင်းသောဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုဆာဗာများမှအရာအားလုံးအပါအဝင်ထုတ်လွှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကျယ်ပြန့ကူညီပံ့ပိုးရန်ကူညီပေးသည်နှင့် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ: Udacity တည်နေရာ: Mountain View, CA အမေရိကန် Udacity ရဲ့မစ်ရှင်ပညာရေးဒီမိုကရေစီရေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဒီလိုအတုထောက်လှမ်းရေး, စက်သင်ယူမှု, စက်ရုပ်, virtual reality နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်နယ်ပယ်များတွင်ပညာရေး groundbreaking အွန်လိုင်းမှသင်ယူမှုပလက်ဖောင်းရာပူဇော်သက္ကာဘို့ပါပဲ။ သင်ယူမှုမှတဆင့် Self-လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, Udacity ထိုကဲ့သို့သောအယောင်ဆောင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းမှမရရှိနိုင် Self-ကားမောင်းကားများအဖြစ်ဆန်းသစ်နည်းပညာများအောင်ဖြစ်ပါတယ် ...
အဆင့်မြင့်ဗီဒီယို Headend အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: အဆင့်မြင့်ဗီဒီယို Headend အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Spectrum တည်နေရာ: Greenwood ကျေးရွာ CO အမေရိကန်ကယောဘ Scope: ဒီအဆင့်မြင့်ဗီဒီယို Headend အင်ဂျင်နီယာချုပ်စစ်ဆင်ရေးအခန်းကဏ္ဍလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆင့် IV အရေးအခင်းကိုပြောင်းလဲကန့်သတ်အပါအဝင်သော်လည်းမအရောင်းအဝယ်နှင့်စီမံကိန်း-based တာဝန်ဝတ္တရား၏တစ်ဦးရောနှောရပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များ & တာဝန်များ: MOPs ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြု, အပြောင်းအလဲများကိုအကောင်အထည်ဖော်များနှင့် updated အဖွဲ့နှင့်သင့်လျော်သောဖြန့်ဖြူး-စာရင်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း ...
1 ၏စာမျက်နှာ 9812345 » 102030...နောက်ဆုံး»